Ungagembula Kanjani Ngokuzibophezela - Ukulwa Nemilutha Yokugembula
Ikhaya / Imihlahlandlela / ungagembula kanjani ngokuzibophezela
Ungagembula kanjani ngokuzibophezela
Kungani Kufanele Ugembule Ngokuzibophezela
Inkinga yokugembula, njengazo zonke ezinye izidakamizwa, ingaphazamisa umsebenzi womuntu, ubudlelwano nesimo sakhe sezezimali. Lokhu kungaholela ekutheni balahlekelwe ngumsebenzi, balwe nabangani babo kanye nemindeni yabo, baze baphule umthetho ukuze bebe imali eningi yokugembula nayo.
Kuyinkinga enkulu okungafanele ithathwe kalula. Kujwayelekile ukuthi umuntu aqale ngokungavumi futhi acabange ukuthi angama noma kunini. Eqinisweni, ukuphela kwendlela umuntu ongelapha ngayo umlutha wokugembula ukuvuma ukuthi banenkinga, baye ‘Babe novalo,’ bese belashwa.
Ngabe ngiyisigqila soku gambula?
Ukulutha ukugembula kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi ukugembula okucindezelayo noma inkinga yokugembula, futhi kuyinkinga yokulawula umfutho. Abalutha ukugembula banezinkinga ekulawuleni isifiso sokugembula. Bazofuna ukugembula yize bengenayo imali, bazi ukuthi umyeni / unkosikazi / umlingani wabo ubenze bathembisa ukuyeka, noma bazi ukuthi bakuloluhlu olumnyama lwekhasino.
Nazi ezinye izimpawu eziyisixwayiso zokuthi ungaba nenkinga yokugembula:
Unemfihlo ngemikhuba yakho yokugembula futhi ujwayele ukufihla ubufakazi bezinhlobo zokugembula.
Awazi ukuthi umisa nini noma kanjani ize isetshenziswe yonke imali yakho.
Ugembula noma ngabe ungenamali noma ukweleta imali eningi ebhange.
Uzwile abangane nomndeni bekutshela ukuthi bakhathazekile ngemikhuba yakho yokugembula, noma uvame ukubatshela ukuthi abanalutho abangakhathazeka ngalo.
Iqiniso vs Insomi
Kuyinsomi ukuthi kufanele usize abanenkinga yokugembula ngokunakekela izikweletu zabo. Kuliqiniso ukuthi uma usiza abanenkinga yokugembula ubenza bakwazi ukugembula ngokwengeziwe. Azikho izixazululo zokulungisa ngokushesha futhi kufanele bafune usizo.
Kuyinsomi ukuthi ukugembula kwakho akunakuba yinkinga uma nje ukwazi ukukukhokhela. Kuliqiniso ukuthi ukugembula akubangeli kuphela izinkinga zezezimali kepha futhi kungadala nezinkinga nabangani, umndeni kanye nozakwabo.
Kuyinsomi ukuthi abenenkinga yokugembula bagembula nsuku zonke. Kuliqiniso ukuthi unenkinga yokugembula ngokushesha lapho ukugembula kukudalela izinkinga. Uma unenkinga yokugembula noma wazi othile onenkinga, sicela uvakashele i Responsible Gambling.